PUBG Mobile ကိုရာသီ ၄ အတွက် hardcore mode အသစ်ဖြင့် update လုပ်သည် Androidsis
ဒါဟာထင်ခဲ့သည် PUBG Mobile သည်ရာသီသစ်4နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သွားခဲ့သည် Royale Pass ၏, ဒါပေမယ့်အဲဒါနဲ့မတူဘူး၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မစ်ရှင်များစွာအတွက်လဲလှယ်ဖို့အတွက်အလှကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုလက်ခံဖို့တစ်ရက်စောင့်ရမယ်။
PUBG Mobile အသစ်၏အသစ်ပြောင်းလဲမှုသည်အခြားသတင်းများကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်မှုမရှိသော်လည်းသတင်းအချို့ပါ ၀ င်သည်။ ရိုင်ဖယ်အသစ်အကြောင်းပြောနိုင်တယ် အသစ်ကအမာခံ mode ကို နှင့်မိုးလေဝသစနစ်၏ပေါင်းစည်းမှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်ရုတ်တရက်မိုးရွာစေမည့်ဂိမ်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းသို့မဟုတ်မြူထူထပ်သောမြူထဲသို့ ၀ င်ထွက်သွားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Tencent Games ၏လက်မှနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခု။
1 အသစ်အမာခံ mode ကိုသို့မဟုတ်စစ်မှန် PUBG ကဘာလဲ
3 PUBG မိုဘိုင်းရာသီ ၄ အလှကုန်များ
အသစ်အမာခံ mode ကိုသို့မဟုတ်စစ်မှန် PUBG ကဘာလဲ
မနေ့က PUBG Mobile သည် Golden Joystick ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းများအတွက်။ အားလုံးတစ်ခု developer များအဘို့ကြီးစွာသောသတင်း မိုဘိုင်းဖုန်းမှအရာရာပြောင်းလဲနေသည့်ဂိမ်း၏။
ဒီ version အသစ် 0.9.5 မှာ hardcore mode အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့မီးမောင်းထိုးပြရမယ် ၎င်းသည် PC နှင့် consoles များအတွက်၎င်း၏ PUBG နှင့်ဆင်တူသည်။ မိုဘိုင်းဗားရှင်းသည်မည်သည့်ကစားသမားမဆိုစစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်မှုများတွင်ကစားသမားများစွာနှင့်စစ်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်မိုဘိုင်းဗားရှင်းကအကူအညီအချို့ကိုသတိရသင့်သည်။ အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှင်သန်ရန်မက်လုံးပေးမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ။
ဆိုလိုသည်မှာ Hardcore mode တွင်ကျွန်ုပ်တို့အနီးရှိရန်သူရှိနေသောအခါ Minimap ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်ခြေရာများ၊ ရန်သူများကိုပစ်မှတ်ထားချိန်တွင်သေနတ်ပစ်ပစ်သည့်အခါအကူအညီသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စုဆောင်းထားသည့်အရာများကိုမေ့ပျောက်နိုင်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ မည်သည့်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရန်အလွန်ပြည့်စုံအဖွဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ ကစားသမား ၁၀၀ တွင် bot လုံးဝမရှိတော့ပါ ဒါကြောင့်စံ mode မှာဖြစ်ပျက်အဖြစ်။
အသစ်နည်းလမ်း အားလုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကစားသမားအားလုံးကိုစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ် အကူအညီမပါပဲ၊ သင်အာရုံစိုက်နေသည့်ရန်သူထံချဉ်းကပ်ပြီးသင်ကြုံတွေ့ရသောအရေးကြီးသောအရာအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ကြားရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်တွင် PUBG အစစ်မှန်ဆုံးကိုရရှိရန်ရောက်ရှိလာခြင်း။
ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ် PUBG Mobile ၏သတင်းများကိုစာရင်းပြုစုပါ:
ထည့်သည် အသစ် M762 အော်တိုရိုင်ဖယ် ထိုမြေပုံအားလုံးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
က မော်တော်ယာဉ်အသစ် Sanhok အတွက်: ဆိုင်ကယ်။
အသစ်အမာခံ mode ကို PC ပေါ်မှာအတူတူအတွေ့အကြုံကိုရောက်စေဖို့။
အသစ်စက်စက် M762 Assault ရိုင်ဖယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မြေပြင်ဒေသများတွင်လွှမ်းမိုးမှုကြီးကြီးမားမားရှိသည် # pubgmobile090! ? pic.twitter.com/zeC6emYfu4
- PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) နိုဝင်ဘာလ 19, 2018
အ PUBG Mobile Mobile Pass သစ်တွင်ဘာတွေထူးလဲ ရာသီ4မှာသူတို့:
အသစ် spearguns အဘို့အချောရှားပါးသောပုံစံများ၊ မျက်နှာသစ်များနှင့်ဆံပင်ပုံစံများ။
ထည့်သည် အနက်ရောင်သောကြာနေ့ဖြစ်ရပ် အရာဝတ္ထု၏ pack ကိုများအတွက်သိသိသာသာအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူ။
သတိရပါ မနက်ဖြန်အထိနိုဝင်ဘာ ၂၁ အထိ, PUBG မိုဘိုင်းရာသီ ၄ ကိုမစတင်ပါ။ တစ်နေ့ရောက်လျှင်ရောက်ရန်နှောင့်နှေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးသတင်း သင် PUBG Mobile ကိုဖွင့်သောအခါစတင်သည် ယနေ့တစ်နေ့တာလုံးတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုအဆင့်မြှင့်ရန် Google Play Store သို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ။
PUBG မိုဘိုင်းရာသီ ၄ အလှကုန်များ
Tencent Games သည်ယနေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် သင် ၀ ယ်နိုင်သည့်မော်ဒယ်အချို့ကိုပြသည် Pass Royale of Season4နှင့်အတူဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလွန်အသေးစိတ်ကျသောဝတ်စုံများနှင့်အထင်ရှားဆုံးမော်တော်ယာဉ်အချို့အတွက်အခြားအရေခွံအချို့ရှိသည်။ ဗင်ကား Miramar နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် နှင့်ဆိုင်ကယ်။
အကယ်၍ သင်သည် PUBG Mobile ကိုနေ့စဉ်ကစားနေပါက၊ ၎င်း၏အစီအစဉ်နှစ်ခုအတွက် Royale ဖြတ်သန်းရ။ ၎င်းတွင်အခြေခံအစီအစဉ်နှင့်အထူးမြင့်မားသောဆောင်းပါးများကိုထပ်မံရရှိခြင်းနှင့် PUBG မိုဘိုင်းမြေပုံများမှတဆင့်သင်လမ်းလျှောက်ရာတွင်ကွဲပြားနိုင်ခြင်းစသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်။ စကားမစပ်သူတို့ထဲကတစ်ခုကမှုတ်သွင်းသည် ချာနိုဘိုင်းအဆောက်အအုံအချို့.
မှနောက်ထပ်အကြီးအ update ကို ရာသီ4ဖွင့်ရန် PUBG မိုဘိုင်း ထို့ကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကစားသမား ၁၀၀ နှင့်အတူထိုအမာခံ mode အသစ်တွင်တွေ့ဆုံပါ။ ဗားရှင်း 100 အသစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် application ကိုစတင်နှောင့်နှေးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG Mobile သည် ၀.၉.၅ အထိအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ၁၀၀ player hardcore mode နှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်သည်